Isikali setrakhi yecandelo - Iilori zelori zaseTshayina, abaXhasi
IPHEPHA LOLAWULO LWEPHIKI
Uhlobo lwe-pitbridge yesisindo ilunge kakhulu kwiindawo ezinendawo encinci njengeendawo ezingekho kwinduli apho ukwakhiwa komhadi kungabizi kakhulu. Kuba iqonga likwinqanaba lomhlaba, izithuthi zinokuya kwi-weightbridge nakweyiphi na indlela. Uninzi lweebreyidingi zoluntu zikhetha olu luyilo.
Iimpawu eziphambili ngamaqonga aqhagamshelwe ngokuthe ngqo, akukho bhokisi zonxibelelwano phakathi, olu luhlobo oluhlaziyiweyo olusekwe kwiinguqulelo ezindala.
Uyilo olutsha lwenza ngcono kubunzima beelori ezinzima. Nje ukuba olu luyilo lusungulwe, luyathandwa kwangoko kwezinye iimarike, luyilelwe ukuba lube nzima, lusetyenziswe rhoqo, kusuku lwemihla ngemihla. Ukugcwala kwetrafiki kunye nangaphezulu kwendlela inobunzima.
I-HOT ETHIZIWEYO YASEKHAYA YENKQUBO YOKUPHAKATHI OKANYE ENGENAKUTHI
* Plain ipleyiti okanye ipleyiti itshekishiwe uyazikhethela
* Yenziwe ngemiqadi ye-4 okanye ye-6 ye-U kunye ne-C yemigangatho yemigangatho, yomelele kwaye iqinile
* Kwahlulwa phakathi, kudityaniswa iibholiti
* Isheyuli ezimbini zesilayidi somthwalo okanye iseli yokucinezela umthwalo
* Ububanzi obukhoyo: 3m, 3.2m, 3.4m
* Ubude obufumanekayo: 6m ~ 24m
* Ubukhulu. Umthamo okhoyo: 30t ~ 200t
Isikali selori yePallet
Isivamvo sokuchaneka okuphezulu siya kubonisa ubunzima obuchanekileyo
Umatshini uphela unobunzima malunga ne-4.85kgs, inokuphatheka kakhulu kwaye ayisindi. Kwixesha elidlulileyo, isitayile esidala besingaphezulu kwe-8 kg, enzima njengokuyithwala.
Uyilo olulula, ubukhulu be-75mm.
Isixhobo sokukhusela esakhelwe ngaphakathi, ukuthintela uxinzelelo lwenzwa. Iwaranti yonyaka omnye.
Izinto ezenziwe ngeAluminiyam, ezomeleleyo nezomeleleyo, ipeyinti yesanti, intle kwaye inesisa
Isilinganisi sensimbi engenasici, kulula ukuyicoca, ubungqina bokuba umhlwa.
Ishaja esemgangathweni ye-Android. Ngentlawulo enye, inokuhlala iiyure ezingama-180.
Cinezela iqhosha "lokuguqula iyunithi" ngokuthe ngqo, unokutshintsha i-KG, G, kunye
Isilinganisi sePallet yokubamba-Isalathi sokukhetha sokuQhuma
Handle type pallet truck scale also named pallet mobile scales scales which etsa weighting lula.
Ukuphatha isikali selori sepallet sinokulinganisa izinto ngexesha lokuhamba endaweni yokuhambisa umthwalo kwisikali. Inokonga ixesha lakho lokusebenza, iphucule ukusebenza kwakho ngokufanelekileyo. Iinketho ezahlukeneyo zezalathi, unokukhetha izikhombisi ezahlukeneyo kunye nobungakanani bepllet ngokokuphindaphindeka kwakho. La manqanaba ahambisa iziphumo ezinokuthenjwa okanye zokubala naphi na apho zisetyenziswa khona.
Isikali somgangatho wekhonkrithi wokulinganisa ubunzima bezithuthi zomthetho ezingaphezulu kwendlela.
Uyilo oludityanisiweyo olusebenzisa ikhonkco lekhonkrithi enesakhelo seemodyuli zentsimbi. Iiphaneli zekhonkrithi zivela kumzi-mveliso zilungele ukufumana ikhonkrithi ngaphandle kwentsimbi okanye ukufakwa kwakhona kwe-rebar okufunekayo.
Iipani zivela kumzi-mveliso zilungele ukufumana ikhonkrithi ngaphandle kwentsimbi okanye ukufakwa kwakhona kwe-rebar okufunekayo.
Oku kwenza lula ukufakwa kwaye kuqinisekiswe umgangatho wekhonkco.
UMGANGATHO WOLAWULO OPHAKAMILEYO / WEBHODI WOKUBEKA ESWENI NOKULINGANISA INKQUBO
Seka indawo yokufumana umthwalo ongapheliyo, kwaye uqokelele ulwazi lwezithuthi kwaye unike ingxelo kwiziko lolawulo lolwazi ngenkqubo yokulinganisa ngesantya esiphezulu.
Inokuqonda inombolo yenqanawe yesithuthi kunye nenkqubo yokuqokelela ubungqina esizeni ukwazisa isithuthi esigcwele umthwalo ngenkqubo ebanzi yolawulo lwenzululwazi yolawulo lwe-overlad.
Isetyenziswa ngokubanzi kwizinto ezinobunzima bexabiso eliphantsi kwezothutho, ulwakhiwo, amandla, ukhuselo lokusingqongileyo kunye namanye amashishini; Ukuhlaliswa korhwebo phakathi kweefektri, imigodi namashishini, kunye nokufunyanwa komthwalo wee-asi zezithuthi zeenkampani zothutho. Ukukhawuleza ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ukusebenza ngokulula, ukufakwa okulula kunye nokugcinwa. Ngokulinganisa i-asi okanye i-asi yeqela lobunzima besithuthi, bonke ubunzima besithuthi bufunyenwe ngokudibana. Inenzuzo yendawo encinci yomgangatho, ukwakhiwa kwesiseko esincinci, ukufuduswa ngokulula, amandla ashukumisayo kunye nokusetyenziswa okungagungqiyo, njl.
Ngethambeka lensimbi, ishenxisa umsebenzi wesiseko saseburhulumenteni okanye irampu yekhonkrithi nayo iya kusebenza, efuna kuphela umsebenzi wesiseko. Kufuneka kuphela indawo enobunzima obugqinsiweyo kwaye egudileyo. Le nkqubo ifumana ukonga kwiindleko zomsebenzi osisiseko kunye nexesha.
Ngeerampu zensimbi, i-weightbridge inokuchithwa kwaye iphinde ihlangane ngaphakathi kwisithuba esifutshane sexesha, inokuhanjiswa rhoqo kufutshane nendawo yokusebenza. Oku kuyakunceda kakhulu ekunciphiseni umgama okhokelayo, ukunciphisa iindleko zokuphatha, amandla omntu, kunye nokuphuculwa okuqinisekileyo kokuvelisa.
Isikali sikaloliwe esimileyo se-elektroniki sisixhobo esinobunzima koololiwe abahamba kaloliwe. Imveliso inesakhiwo esilula kunye nenoveli, inkangeleko entle, ukuchaneka okuphezulu, imilinganiselo echanekileyo, ukufunda okunomdla, isantya sokulinganisa ngokukhawuleza, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, njl.
UkuLungiswa kweMisa, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ubunzima obuqinisekisiweyo, Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital,